FAQ - jl Khiphela Co., Ltd
Konke mayelana nemikhiqizo yethu:
Uyini umphumela yezimila ezikhishwe, ikakhulukazi uma uqhathanisa ne izidakamizwa zamakhemikhali?
Plant ezikhishwe kuthiwa yemvelo ezikhishwe izitshalo, basebenza. Kodwa, asikwazanga umane ukuqhathanisa umphumela phakathi isitshalo ezikhishwe nezidakamizwa zamakhemikhali, ngoba lo mshini wezenzo akufani. Nakuba isitshalo izingxenyana futhi ube ezinye imisebenzi ejwayelekile, isitshalo izingxenyana ngokuvamile ingasetshenziswa njengoba Izithako, it is ayikwazanga esikhundleni izidakamizwa zamakhemikhali. Iningi isitshalo okukhishwe kuyinto kungekho side effect.
Asikwazi ukuthola umkhiqizo sifuna ngomkhiqizo Isigaba, yini okumele ngiyenze?
Sigxila isiqetjhana isitshalo emaqenjini amabili,
Iqembu B: Tshala ezikhishwe i-Botanical Zinambuzane & Bactericide (Phytogenous) ukukhiqizwa yethu abanolwazi kanye R & D Ithimba nokuthuthukisa ukuklama imikhiqizo Ukucaciswa afaneleka Okuphakelayo futhi kwenze izibulala-zinambuzane.
PPM ukuthi: Izingxenye ngamunye Million, PPB ukuthi: Izingxenye ngamunye Billion
Ingabe isitshalo akhiphe babe kuphela asalile?
Kuya ngesimo. Thina ikakhulukazi ukusebenzisa amanzi kanye notshwala ezidliwayo njengoba kuphela, iningi isitshalo ezikhishwe kukhona ngaphandle kwabanye kuphela asalile.
ukwamukela ejwayelekile nomkhiqizi ukucutshungulwa, siye sazuza ngonyaka abaningi nakho ukukhiqiza amakhulu izinto. Ngokusho yokufunwa yekhasimende, thina ungaveza ubukhulu kuyizinhlayiyana kusuka 60 anezikhala ukuba anezikhala 200, athobele ukuthekelisa ejwayelekile, ukuhlangabezana umbandela ezidliwayo kanye officinal.
Ukuze Okuphakelayo & Veterinary Izidakamizwa
Zonke izinto ezikhishwe Botanical akhiqizwa speicification nekhwalithi okuyinto zinhle izindleko zokusebenza okuphakelayo, futhi Sigcina okufanayo izinga ejwayelekile njengoba Ukudla grade, kanye imikhiqizo ngokuvumelana nomthetho Okuphakelayo European, ukuhambisana na QS standard.All le Botanical ezikhishwe ezisetshenziswa njengeziwusizo okuphakelayo additiive futhi ukudla njll
Ukuze zinambuzane Botanical & Bactericide (Phytogenous)
Ngemva kweminyaka eminingi 'ucwaningo, ukukhiqiza futhi yokuthengisa, Thina athuthukile futhi yakhelwe ezikhishwe Botanical i Ukucaciswa elungiselelwe nekhwalithi, afaneleka ukuba esebenzayo zinambuzane futhi Bactericide. yonke imikhiqizo efakwe manje isicelo.
Thina ikakhulu sigxile ezintathu Mkhiqizo Ukwahlukanisa, zingabantu
> Ukuze zinambuzane Botanical & Bactericide (Phytogenous)
> Ukuze Okuphakelayo & Veterinary Izidakamizwa
> Zemifino Izithelo Powder
Konke mayelana Quality Control System:
Singangena kanjani amasampula mahhala yekuvivinya kusukela Jieliang Khiphela?
Sijabula kakhulu ngokuthi ukunikeza namaklayenti 5G-20g amasampula mahhala lab ukuhlolwa, kanye COA yokuqala, Sicela uxhumane nathi ukuze yakho nanoma yikuphi ukukhathazeka.
Ayikwazanga osinikeza lona ifomula design usizo?
Yebo, senza. hhayi kuphela ukunikezela Botanic / Plant okukhishwe, kodwa futhi sinikeza ifomula amasevisi design, inkontileka yokukhiqiza kanye izithako izicelo izixazululo.
Ayikwazanga amaklayenti athole udumo kusukela Jieliang Khiphela?
Siyakwamukela uphinda namaklayenti umlando omuhle inkokhelo ukuze isicelo sesikweletu.
Sicela uxhumane nathi ukuze ifomu lekhadi isicelo.
sigqoko umzuzi inkokhelo lapho senza inkokhelo
T / T L / C: Hebei Jieliang Khiphela Biotech Co., Ltd
Bank of China akhawunti akukho. 101342734265.
Western Union: UMnu Lijianjun
Noma yimuphi omunye alamukeleki.
Ngingayithola kanjani ukukhokhela oda wami?
Kuyini MOQ (oda elincane ubuningi) oda?
Shipping nge Air: MOQ kuyinto 45kg mpahla ngamunye.
Ukuthumela Sea: MOQ kuyinto 25kg mpahla ngamunye.
(Kuya ngokuthi imikhiqizo futhi, sicela uxhumane nathi ukuze uthole imininingwane).
Ngingumfana umuntu hhayi inkampani. Ngingaba ukuthenga Plant Khiphela?
Uxolo esiyikho B2B. Okwamanje We kuphela ukwanelisa izinto zokusetshenziswa ngenqwaba bio zinambuzane kanye feed abakhiqizi kanye nabasabalalisi abafanelekayo, hhayi umuntu.
Ngingayithola kanjani oda uma Angikho ujwayelene ukungeniswa international?
Thina has okunekhono logistic ithimba samazwe mpahla imisebenzi. Asikwazanga ukuphakela Fob, VGA, endlini ngendlu isevisi (DDU / DDP imigomo) yama-oda wakho ku-kwamanye amazwe, lithembela.
Yini ukuhlolwa inkampani yangaphandle musa Jieliang Khiphela umsebenzi nge?
Siphinde futhi sisebenze eyesithathu ukuhlolwa party, ezifana SGS, China Ukuhlolwa Bureau, China National Plant Resource Umsebenzi Engineering Centre, njll
Noma yimuphi omunye imikhiqizo indlela yokuphathwa kwamazinga izitifiketi?
Thina eliqinisekiswe yi ISO9001 kanye na-QS.
Yiziphi yethu uhlelo imikhiqizo izinga control?
Ngokwe-ISO ukuphathwa uhlelo, zonke izimpahla batch kumele ihlolwe ngesikhathi senqubo umkhiqizo futhi ngaphambi kwezidingo QC ithimba qiniseka we potency umkhiqizo, ubumsulwa, neminye imininingo edingekayo.
Konke mayelana Logistic:
iyona nokupakisha kanjani?
Sample nokupakisha: izikhwama zepulasitiki Double ngaphakathi, aluminium ucwecwe isikhwama ngaphandle,
nokupakisha Bulk eyodwa: zepulasitiki double ngaphakathi, iphepha izigubhu ngaphandle, 20kgs-25kg / isigubhu.
nokupakisha Bulk ezimbili: izikhwama 1kg-5kgs plastic ngaphakathi nge aluminium ucwecwe isikhwama ngaphandle, efake e izigubhu iphepha, 20kgs-25kgs / isigubhu.
Ukupakisha Bulk ezintathu: 25kgs, 50kgs, 100kgs futhi 200kgs, Plastic Drum.
Kuyoze kube nini yisikhathi ukulethwa?
Shipping isikhathi by isitsha: 1 kuya ku-2 amaviki ngokuvumelana ezahlukene lapho uya khona nezimbobo.
Shipping isikhathi ngendiza: 2 izinsuku ukuze 6 ukusebenza.
Kanjani mayelana zokuhamba ngezinto zomphakathi? Yiziphi evamile lamachweba yakho?
International amasevisi Courier futhi izimpahla Services kokubili ayatholakala.
Ngu Sea ngemikhumbi: Tianjin, Shanghai
Ngu Air mpahla: Beijing, Shanghai